လောင်းကစားသချာင်္ Changed ခုနစ် Lucky နည်းလမ်းများ - သတင်း Rule
လောင်းကစားသချာင်္ Changed ခုနစ် Lucky နည်းလမ်းများ
လောင်းကစားခေတ်သစ်ကမ္ဘာလုပ်ဝိုင်းသောဒုဖြစ်ပါသည်. ဒီနေရာမှာသင်္ချာပညာရှင်ကိုအာဒံ Kucharski ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်ကတ်ကိုဂိမ်းယခုသိပ္ပံပညာ၏အခြေခံဖြစ်ကြောင်းအများအပြားအတွေးအခေါ်များမှုတ်သွင်းပုံကိုကရှင်းပြသည်.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “လောင်းကစားဝိုင်းသင်္ချာကိုပြောင်းလဲခုနစ်ကံကောင်းနည်းလမ်းများ” အာဒံကို Kucharski ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 5th, May အပေါ်များအတွက် 2016 05.18 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ထဲမှာ 16ကြိမ်မြောက် ရာစု, ကံကောင်းခြင်းများကိုတွက်ချက်ရန်လမ်းမရှိခဲ့. တစ်စုံတစ်ဦးကအန်စာတုံးရဲ့ဂိမ်းကာလအတွင်းနှစ်ဦး Sixes လှိမ့်နေလျှင်, လူကပဲကောင်းသောကံကြမ္မာထင်. Gerolamo Cardano, ရာသက်ပန်လောင်းကစားဝိုင်းအလေ့အထနဲ့အီတလီသမား, မဟုတ်ရင်စိတ်ထင်. သူကသင်္ချာဂိမ်းလောင်းကစားကိုင်တွယ်ရန်ဆုံးဖြတ်, နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ရပ်များ၏ 'နမူနာအာကာသ' 'navigate ဖို့ဘယ်လိုဖော်ပြထားကြောင်းလောင်းကစားသမားတွေကို manual wrote. ဥပမာအားဖြင့်, နှစ်ဦးအန်စာတုံးထဲမှာဆင်းသက်နိုင်ပါတယ်စဉ် 36 ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေ, တစ်ဦးတည်းသာဤနှစ်ခု Sixes ထုတ်လုပ်.
ယခုဤဖြစ်နိုင်ခြေ၏သီအိုရီဟုခေါ်သည်ဘယ်အရာ၏အစအဦးဖြစ်ခဲ့သည်. ဒါဟာကျနော်တို့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုသည်မည်မျှဖွယ်ရှိများကိုတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်, ကျွန်တော်ကံ-ပြီအတိအကျဘယ်လောက်ကံကောင်း-သို့မဟုတ်ထွက်အလုပ်လုပ်. မိမိအသစ်ကိုနည်းလမ်းများမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, Cardano လောင်းကစားခန်းမမှာအလွန်အရေးပါအားသာချက်ရရှိခဲ့ပြီး, နှင့်သင်္ချာဘာသာရပ်လေ့လာမှုတစ်ခုလုံးအသစ်လယ်ကွင်းရရှိခဲ့.
သငျသညျမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်အကြွေစေ့ tossing နေဆိုပါစို့, ခြောက်ထောင်ဆမ်းအနိုင်ရမှပထမဦးဆုံး£ 100 ကိုရရှိသွားတဲ့. အလောင်းကစားကိုသင် 5-3 ဦးဆောင်အတူစွန့်ပစ်ပါကသင်မည်သို့ငွေကိုခွဲသင့်တယ်? တွင် 1654, ပြင်သစ်မင်းသား Antoine Gombaud ဤကဲ့သို့သောသူ့ကို '' အမှတ်ပြဿနာ '' ဖြေရှင်းပေးကိုကူညီချာ Pierre de Fermat နှင့်ဖြစ်သူဘလေးဇကယ်လို့မေး.
မေးခွန်းကိုကိုင်တွယ်ရန်, Fermat နှင့် Pascal '' မျှော်လင့်ထားတန်ဖိုးကို '' အဖြစ်လူသိများနေတဲ့အယူအဆကြံစည်. ဒါကကစားပွဲအကြိမ်ကြိမ်ပြီးမြောက်ဖို့ကစားခဲ့ကြလျှင်အသီးအသီးအခြမ်းပျမ်းမျှအနိုင်ရမယ်လို့ကာလ၏အချိုးအစားအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်. အဆိုပါအယူအဆယခုစီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်: တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏မျှော်မှန်းတန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ခြင်းဖြင့်, ကျွန်တော်တစ်ဦးချင်းစီပါတီမှထိုက်သည်မည်မျှထွက်အလုပ်လုပ်နိုင်.
ထိုအကြွေစေ့ဆမ်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, မင်းသူငယ်ချင်း (5-3 ဆင်းသောသူသည်) အနိုင်ရမှတတန်းအတွက်သုံးမှန်ကန်သောဆမ်းရဖို့လို. သူတို့ကတစ်ဦးရှိ 1 တွင် 8 ဤသို့ပြု၏အခွင့်အလမ်း, သငျတို့သညျအခွားအနိုင်ရမယ်လို့7ထဲက 8 ပျမ်းမျှအကြိမ်. ငွေကိုထိုကြောင့်အတွက်ခွဲထွက်သင့်ပါတယ် 7:1 အချိုးအစား, i.e. £ 87,50 မှ£ 12,50.
ထို 1890 စဉ်အတွင်း, ထို အမိုနာကို သတင်းစာမှန်မှန် Monte Carlo ၏လောင်းကစားရုံအတွက်ကစားတဲ့လှည့်ခြင်းများ၏ရလဒ်များကိုထုတ်ဝေမယ်လို့. ထိုအချိန်မှာ, ဒါကြောင့်သင်္ချာပညာရှင်ကားလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pearson ရှာဖွေနေခဲ့သည်အတိအကျဘာခဲ့သည်. သူကကျပန်းဖြစ်ရပ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်, အပေါ်သူ၏နည်းစနစ်ကိုစမ်းသပ်ဖို့နဲ့လိုအပ်ဒေတာ. ကံမကောင်းသဖြင့်, ထိုသို့ကစားတဲ့ရထားဘီးကသူမျှော်လင့်ချင်ပါတယ်အဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်ကျပန်းမဟုတ်ကြကြောင်းသလိုပဲ. '' ရှိ Monte Carlo ကစားတဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဘူမိဗေဒဆိုင်ရာအချိန်ရဲ့အစအဦးကတည်းကပေါ်သွားပြီခဲ့မယ်ဆိုရင်,'' တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pearson data ကိုလေ့လာနေပြီးနောက်မှတ်ချက်ချ, 'ဤနှစ်ပတ်ရဲ့ကစားတခါဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြသကဲ့သို့ငါတို့ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ပျက်မှုမျှော်မှန်းထားသည်ရှိသည်ဟုမဖြစ်သင့်' '.
Pearson ရဲ့နည်းလမ်းများ, မိမိအကစားတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဆင့်ရယူနိုင်ပါတယ်, ယခုသိပ္ပံပညာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း. မူးယစ်စမ်းသပ်မှုတွေကနေ CERN တွင်စမ်းသပ်ချက်မှ, သုတေသီများသူတို့လေ့လာတအဖြစ်အစွန်းရောက်အဖြစ်ရလဒ်ရယူများ၏အခွင့်အလမ်းကိုတွက်ချက်ခြင်းဖြင့်သီအိုရီကိုစမ်းသပ်, သက်သက်သာကံအားဖြင့်. ဤသည်၎င်းတို့၏အယူအဆကူညီပံ့ပိုးရန်လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်ရှိမရှိတည်ထောင်ရန်သူတို့ကိုနိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ရလဒ်တွေကိုတစ်ဦးတိုက်ဆိုင်မှုထက်ပိုပြီးဘာမှမဖြစ်စေခြင်းငှါ, ရှိမရှိ. Pearson ရဲ့ဘက်လိုက်ကစားတဲ့ဒေတာကြောင့်, ထိုရှင်းပြချက်အိမ်သို့နီးကပ်လာခဲ့သည်. ဒါဟာအစားအလှည့်ခြင်းများ၏ရလဒ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထက်ထွက်လှည့်, အပျင်း အမိုနာကို သတင်းသမားတွေကပဲနံပါတ်များကိုတက်စေရန်ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်.
ကျနော်တို့အောက်ပါဂိမ်းကစားဆိုရမည်. ငါအကြိမ်ကြိမ်အကြွေစေ့ဆမ်း, ဦးခေါင်းမှီတိုငျအောငျပထမဦးဆုံးပုံပေါ်. ဦးခေါင်းကိုပထမဦးဆုံးပစ်ပေါ်ခဲ့လျှင်, ငါသည်သင်တို့ကို£2ပေးဆောင်. ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးဒုတိယပစ်ပေါ်ခဲ့လျှင်, ငါသည်သင်တို့ကို£4ပေးပါ; တတိယအပေါ်လျှင်, ငါဒါအပေါ်£ 8 ပေးဆောင်နှင့်, အသီးအသီးအချိန်နှစ်ဆ. ဘယ်လောက်သင်ဤဂိမ်းကစားငါ့ကိုဆပ်ဖို့ကိုပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်?
ဒီဂိမ်း, စိန့်ပီတာစဘတ်ထီအဖြစ်လူသိများ, စိတ်မပျက် 18ကြိမ်မြောက် ဂိမ်းရဲ့မျှော်မှန်းတန်ဖိုးကိုသောကွောငျ့ရာစုချာ (i.e. လူအပေါင်းတို့သည်ဆုကြေးငွေ၏ပျမ်းမျှကြောင့်အကြိမ်ဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ကစားခဲ့ကြလျှင်) ကြီးမားသောခဲ့သည်. သို့သော်, လူအနည်းငယ်ကစားရန်အနည်းငယ်ပေါင်ထက်ပိုဆပ်ဖို့ဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်. တွင် 1738, သင်္ချာပညာရှင်ဒံယလေသ Bernouilli '' utility ကို '' ၏အယူအဆမိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်ပဟေဠိဖြေရှင်း. ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိပါတယ်အဆိုပါလျော့နည်းပိုက်ဆံ, နည်းလေသူတို့တစ်လောင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏသည်ငယ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်အန္တာရာယ်ဖို့ဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်. utility ဘောဂဗေဒအတွက်ယခုဗဟိုစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်, နှင့်တကယ်တော့တစ်ခုလုံးကိုအာမခံစက်မှုလုပ်ငန်းအထောက်အပံ့. ကျွန်တော်တို့အများစုဟာအစားကြီးမားတဲ့အလားအလာတာဝန်ခံကိုရှောင်ကြဉ်ရန်သေးငယ်တဲ့ပုံမှန်ငွေပေးချေမှုစေ, ကျွန်တော်တို့ပျမ်းမျှအားပိုမိုပေးဆောင်တက်အဆုံးသတ်လျှင်ပင်.
တွင် 1908, သင်္ချာပညာရှင် Henri Poincaréစာအုပ်ကို '' သိပ္ပံနှင့် Method ကို '' ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ, သောသူဟောကိန်းများအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုလုံ့လဝိရိယ. သူကစားတဲ့တူဂိမ်းဘောလုံးကို-သောတိကျစွာ-နိုင်ကနိုင်ဘယ်မှာအပေါ်ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကိုတိုင်းတာရန်အလွန်ခက်ခဲ၏ကနဦးမြန်နှုန်းအတွက်သေးငယ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုသောကွောငျ့ကျပန်းပေါ်လာကြောင်းမှတ်ချက်ပြု. ၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင် 20ကြိမ်မြောက် ရာစု, ဒီ '' ကနဦးအခြေအနေများပေါ်တွင်အထိခိုက်မခံမှီခို '' ပရမ်းပတာသီအိုရီ '' ၏အခြေခံသဘောတရားများကိုတစျခုဖွစျလာမညျ. ရည်ရွယ်ချက်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီစနစ်များအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းများ၏ကန့်သတ်ဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်.
ပရမ်းပတာသီအိုရီတစ်ခုသိပ္ပံနည်းကျလယ်သို့ကြီးပွားအဖြစ်, ကစားတဲ့နဲ့ဆက်သွယ်မှုဆက်ရှိနေ. 1970 အတွက်ပရမ်းပတာသီအိုရီ၏အစောပိုင်းရှေ့ဆောင်အချို့သည် J ကိုတူရူပဗေဒပညာရှင်ခဲ့ကြ. Doyne လယ်သမားနှင့်ရောဘတ်ကို Shaw, သူတစ်ဦးကစားတဲ့၏အမြန်နှုန်းကိုတိုင်းတာရန်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံသို့ hidden ကွန်ပျူတာများ sneaking သူတို့၏ကျောင်းသားရက်ကြာဘောလုံးနှင့်အောင်မြင်စွာရလဒ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ဒေတာကို အသုံးပြု. ခဲ့.
6. Solitaire နှင့်ခြင်း simulation ၏တန်ခိုး
ကွန်ပျူတာများဖြစ်နိုင်ခြေ၏သိပ္ပံပညာအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍကိုကစားခဲ့ကြ. အဓိကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတစ်ခုမှာ 1940 လာ., Stanislaw ဥလံလို့ခေါ်တဲ့သင်္ချာပညာရှင်မှကျေးဇူးတင်စကား. မိမိအသက်တူရွယ်တူအများတို့သည်လည်းမတူဘဲ, သူရှည်တွက်ချက်မှုမှတဆင့် trudging ခြင်းကိုနှစ်သက်သူကိုလူတစ်ဦး၏မျိုးမဟုတ်ခဲ့. သူဟာတစ်ချိန်ကအတွက်အစပြုကြောင်း solitaire ၏ Canfield-ပုံစံကစားကာစီနိုလောင်းကစားရုံ-ကြောင့်ကတ်များအနိုင်ရဂိမ်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖန်ဆင်းသောလမ်းအတွက်လဲကြလိမ့်မယ်လို့ခဲ့ပုံကိုဖွယ်ရှိသိချင်ခဲ့သည်. အဲဒီအစားထက်အပေါငျးတို့ဖြစ်နိုင်ခြေကြိုးစားကြည့်ပါနှင့်တွက်ချက်, သူကပဲကတ်များအကြိမ်ပေါင်းများစွာထုတ် တင်. ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူခဲ့သဘောပေါက်.
တွင် 1947, ဥလံနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဂျွန်ဗွန်နျူမန်သစ် technique ကိုလျှောက်ထား, သောသူတို့သည် '' ရှိ Monte Carlo နည်းလမ်း '' အမည်ဝှက်ပေးထားသော, နယူးမက္ကစီကိုအတွက် Los Alamos မြိုအမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းမှာနျူကလီးယားကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုကိုလေ့လာဖို့. ထပ်ခါတလဲလဲကွန်ပျူတာ Simulator ကိုသုံးပြီးအားဖြင့်, သူတို့ရိုးရာသင်္ချာနှင့်အတူဖြေရှင်းဖို့လည်းရှုပ်ထွေးခဲ့ကြောင်းပြဿနာတစ်ခုကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်. အဆိုပါ Monte Carlo နည်းလမ်းကတည်းကအဖြစ်ကောင်းစွာအခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတစ်ဦးအရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာသည်, ကွန်ပျူတာဂရပ်ဖစ်မှရောဂါဖြစ်ပွားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်.
7. Poker နှင့်ဂိမ်းသီအိုရီ
ဂျွန်ဗွန်နျူမန်အရာမြားစှာမှာတောက်ပခဲ့, ဒါပေမဲ့ဖဲချပ်ကိုအမြဲတမ်းသူတို့ထဲကတစ်ဦးမဟုတ်ခဲ့. ထိရောက်သောဖြစ်စေခြင်းငှါ, အဘယျသို့မဟာဗျူဟာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, သူထို့ကြောင့်သင်္ချာဂိမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဆုံးဖြတ်. ကဒ်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစေခြင်းငှါအဘယျသို့ထွက်အလုပ်လုပ်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမေးခွန်းခဲ့ပေမယ့်, တယောက်တည်းကပြဿနာဖြေရှင်းရေးအနိုင်ရဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ခဲ့: သူလည်းသူ့အပြိုင်ဘက်ဘယ်သို့ပြုအံ့နည်းမျှော်လင့်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ချင်ပါတယ်.
ဖဲချပ်များနှင့် Baccarat တူဂိမ်း von နျူမန်ရဲ့သုံးသပ်ချက် '' ဂိမ်းသီအိုရီကို '' ၏လယ်ပြင်မှဦးဆောင်, သောကွဲပြားခြားနားတဲ့ကစားသမားတွေအကြားမဟာဗျူဟာနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏သင်္ချာကို examine. ဗွန်နျူမန်ရဲ့အတွေးအခေါ်များပေါ်တွင်တည်ဆောက်သူတို့တွင်ယောဟနျသ Nash ခဲ့သည်, အဘယ်သူ၏ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်တွင် 'တစ်ဦးတင့်တယ်စိတ်' 'အားကြားပြောလေ၏. ဂိမ်းသီအိုရီကတည်းကဘောဂဗေဒသို့၎င်း၏လမ်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီ, အတုထောက်လှမ်းရေးနှင့်ပင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဇီဝဗေဒ. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကလောင်းကစားကနေအိုင်ဒီယာဤမျှလောက်များစွာသောလယ်ကွင်း permeated ကြပြီဒါအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး. ဗွန်နျူမန်တခါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, '' စစ်မှန်သောဘဝ bluffing ပါဝင်သည် '.
အာဒံကို Kucharski ရဲ့စာအုပ် အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသောလောင်းကစား: ဘယ်လိုသိပ္ပံနှင့်သချာင်္လောင်းကစားများ၏ Luck ထဲကရိုက်ယူခြင်းခံရ ဗြိတိန်တွင်ယနေ့ထွက်သည်.
31886	15 Numberland အတွက်အဲလက်စ် Bello ရဲ့ Adventures ကို, အပိုဒ်, Blogposts, သင်္ချာအတတ်ပညာ, သိပ္ပံ, သိပ္ပံဘလော့ဂ်ကွန်ယက်ကို, ဗြိတိန်သိပ္ပံ
← အကောင်းဆုံးကို Wi-Fi ကို Speakers ခြောက် LG က G5 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း →